23 Responses to “မေတ္တာရနံ့”
ဟုတ်တယ်..၊ မအိုင်အိုရာ ပြောသလိုပဲ၊ ဘာသာပြန်တဲ့ အခါ မချောရဲ့ စကားလုံး ရွေးချယ်မှုက တကယ်ပဲ ချီးကျူးစရာပါပဲ၊ ခေါင်းစဉ်ကအစ ရိုးရိုးကြီး ဖြစ်မနေအောင် ပေးတတ်တယ်၊ အခုလို ညက်ညောတဲ့ ဘာသာပြန်တွေနဲ့ ဆက်ပြီး ဝေမျှပါဦး....။
လူဘ၀ရလာရင် စိတ်ဆင်းရဲစရာ၊ ပူပန်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာ သဘာဝပါပဲအစ်မရေ။ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ သန့် ရှင်းတဲ့ မေတ္တာစစ်၊ လူသားချင်းကြင်နာယုယ မှုတွေဟာ လူ့ သဘာဝ အတွက် အကာအရံ ဒိုင်း တွေပဲ မဟုတ်လား အစ်မချောရေ...။
သန့် ရှင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့နှောင်ဖွဲ့ ပြီး လူသားတွေ အချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းကြရင် ကမ္ဘာကြီး သာယာလှပလာမှာ ပါလေ..။
(သိပ်ဖတ်လို့ ကောင်းတာပဲ.. ညစ်နေတာလေးတွေ ပျောက်သွားတယ်)
Thank you so much for translation and sharing this beautiful piece, Chaw.
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ စာစုလေးပဲဗျာ..း))... မချောဘာသာပြန်တာတွေ သိပ်ကောင်းတယ်...
မိဘနှင့် သား၊ သမီးဟာ စိတ်ခြင်း ဆက်သွယ်မူ ရှိကြတာပဲလေ။
အမေ့ မေတ္တာစွမ်းအားက အံသြစရာ ကောင်းအောင် ကြီးမားတဲ့ သဘောပေါ့နော်..
မိခင်မေတ္တာတိုင်းမှာ အံ့သြဘွယ်ရာ ကြီးမားတဲ့ စွမ်းအင်တွေ ရှိနေကြတယ်နော်...
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး အဲ့လိုပဲ မွေးကာစ ပေါင်မပြည့်လို့ ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲ နေခဲ့ရချိန်တွေ ၊ကိုယ့်ငယ်ငယ်တုံးက ချူချာခဲ့တဲ့အချိန် မှာ မေမေဘယ်လောက်ပင်ပန်းခဲ့လေမလည်း တို့ တွေးမိသွားပါတယ် မချောရေ...
မိဘကျေးဇူးဆိုတာ ရှိနေသေးတဲ့အချိန်လေးမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆပ်သင့်ပါတယ်...
စာရေးကောင်းတဲ့ မချောတယောက် စာပေကောင်းလေးတွေ ဆက်လက် ရေးသားနိုင်ပါစေ
မိဘမေတ္တာ က တော့ အမြဲ လေးစားနေရတာပဲ အမရေ
Came to read the translated novel. Very touching. Love it.
ဘာသာပြန် အားကီး မိုက်လယ်...
မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဇွဲ၊ ယုံကြည်မှု နဲ့ ထက်သန်တဲ့ မေတ္တာတရားတို့ ကြောင့် ရှင်သန်ခွင့်ရလာတဲ့ အပြင် လူစဉ်မှီတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာဟာ အရမ်း ဆူးရှတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာစိတ်ကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ဆိုမှုလေးလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။
မိခင်မေတ္တာရဲ့ စွမ်းပကားလို့ ဆိုရမလို ကလေးရဲ့ ကံလို့လည်း ပြောရမှာပါပဲ။
မေတ္တာစွမ်းကြောင့် လန်းဆန်းဖူးပွင့်လာတဲ့ ပန်းကလေးအကြောင်း ဖတ်ရင်း မိုးနံ့လေးပါ ရှုရှိုက်မိသွားတယ် ချောရေ...
မချော မေတ္တာရနံ့လေးက ဖတ်ရတာကြည်နူးစရာလေး၊
smell of the love ...
မချောရဲ့ မြန်မာပြန်လေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ။
ဘာသာပြန်ကောင်းတဲ့ အခါ ရသ ကပေါ်လွင်တာကိုး။
မူရင်းတွေကိုဖတ်ပေမဲ့ စိတ်မှာ အဟာရ မတွေ့မိလို့။
မေတ္တာကို မိုးရနံ့  နဲ့ခိုင်းနှိုင်းတာ ကြိုက်တယ်။
အဲ့ ဒီ မိုးရနံ့ က စာနဲ့ဘယ်လို ပေါ်လွင်အောင်
ဖွဲ့ ရမှန်းမသိပေမယ့်မိုးရနံ့  အေးအေးလေး
ဆိုတာနဲ့တင် သိ နေပြီနော်..။
မချောရေ .ဆွေလေးလဲ ခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ်။
ရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲ ရသကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုလဲ ရသွားတာပဲ။
ရေးတာကောင်းတော့ ကိုယ့်အဖြစ်ကို ပြန်မြင်ယောင်ရတဲ့ အထိပဲ။
ကျွန်မသားလေး ၆လမှာ ကိုယ်ပူလို့ဆေးရုံတင်ရတယ်။ ကိုယ်ပူရုံပါပဲ ငယ်လွန်တော့ အဖျားရှိတာကို ဆရာဝန်တွေက မကြိုက်လို့ ဆေးရုံတင်ခိုင်းတာပေါ့၊ ရောဂါတော့ မတူပေမယ့် မိခင်နေရာမှာ ခံစားရတာတွေကတော့ ချောရေးတဲ့ အတိုင်းပါပဲ (ဘာသာပြန်ကောင်းဖြစ်တာလဲပါတာပေါ့)။
အခုတော့ သားက စကားတွေ အရမ်းတတ်နေပြီး တခါတလေ “ ကြည်နူးပီတိ အဟုန်တို့ကြောင့် အေးမြလန်းဆန်းကာ ငြိမ့်ငြိမ့်ညင်သာလေး ခံစား” ရပါတယ်။